स्क्याम १९९२ भर्सेस बिग बुल : कहानी एउटै, नतिजा फरक | GNN Nepal GNN Nepal स्क्याम १९९२ भर्सेस बिग बुल : कहानी एउटै, नतिजा फरक | GNN Nepal
गुड फ्राइडेमा मूभी रिभ्यु :
वैशाख २४ गते, २०७८ १५:३१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सायद भारत देखी नेपालसम्म स्क्याम १९९२ नहेरेको मानिसहरू कमै भेटिएलान् । त्यसैको पृष्ठभूमिमा अथवा एउटै परिवेशमा अर्को पनि एक भारतीय चलचित्र बन्यो “बिग बुल।” तर यी दुई सिरिज र फिल्मको कहानी एउटै भएपनि नतिजा भने बिलकुल फरक आएको छ । अर्थात् एउटा सुपर हिट अर्को सुपर फ्लप ।
अभिषेक बच्चन अभिनीत बिग बुलको आलोचना गर्ने सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको यसलाई स्क्याम १९९२ संग तुलना गर्नु हो । स्क्याम १९९२ मा कलाकारले गरेको अभिनय देखी मेहनतलाई बिगबुलसंग तुलना गर्ने हो भने यो आफैँ स्वतः आलोचित हुन्छ । दर्शकहरू पनि भन्छन्, ‘एकै धारका यी दुई कहानीको तुलना गर्नु दुवैका कलाकारहरूको कडा परिश्रमको अन्याय हुन्छ ।’
त्यसकारण हामी तुलना बाहेक बिग बुलको पहेँलीमा कुरौँ -कहाँ गडबडी भयो र कहाँ यो फिल्म कडा थियो।
स्वतन्त्र भारतको सबैभन्दा ठुलो शेयर बजार घोटाला, जसलाई हर्षद मेहता घोटाला पनि भन्न सकिन्छ। यसबारे यति धेरै पुस्तकहरू आएका छन्, युट्युब भिडियो छन् कि सबैलाई यसबारे ज्ञानको कुनै कमी छैन। सबैलाई थाहा छ -यो घोटाला कसरी भयो । हर्षद मेहताले कुन कमजोर कडी प्रयोग गरेका थिए। १० एपिसोडको सिरिज हेरिसकेपछि यो सबै प्रस्ट पनि भैसकेको थियो । त्यस कारण बिग बुल अघि चुनौतीहरू धेरै बढी थिए । सबैलाई फिल्ममा काल्पनिक नामहरू दिइएको छ। हर्षद मेहता हेमन्त शाह (अभिषेक बच्चन) बनेका छन् । राम जेठमलानी को स्थानमा मिर्चनदानी (राम कपूर) छन् । सुचेता दलाल मीरा राव (इलियाना डिक्रूज) भएकी छिन् ।
नाम जरुर अलग गरिएको छ, तर त्यही कहानी सबैभन्दा ठुलो घोटालाकै हो । हर्षद मेहताको सङ्घर्ष देखाइन्छ । उसको लोभ लालचको को वर्णन हुन्छ । उनको गोप्य रणनीतिको बारेमा जानकारी पनि देखाइन्छ ।
बस्, निर्देशक कुकी गुलटीले कसरी यी सबै पक्षहरू श्रोताको अगाडि प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने कुरा हेर्ने हो।
केवल मसला ?
बलिउड फिल्म र ओटिटिको संसारमा सबैभन्दा ठुलो भिन्नता भनेको एउटा ठाउँमा मसला हालेर थपेर पस्किइन्छ भने अर्को ठाउँमा वास्तविकता देखाइन्छ । बिग बुलमा हर्षद मेहताको कथा छ तर धेरै मिर्च मसलाका साथ । बिग बुलमा वास्तविकतालाई थोरै भए पनि दर्शक माझ ल्याइएको भए देख्न लायक हुन्थ्यो तर यहाँ त ठिक उल्टो भयो । कहानीलाई पनि तोडमोड गर्ने कोसिस गरियो ।
निर्माताहरूको सबैभन्दा ठुलो चलाखी
बिग बुलका निर्माताहरूले पनि श्रोताहरूसँग खेल खेलेका छन्। यो फिल्म दुई भागमा विभाजित छ। पहिलो भागमा हर्षद मेहता चोर हुन्छन् । तर दोस्रो भाग आउने बित्तिकै उनी मसिहा बनिसक्छन् । पहिलो भागमा उसले ईन्साइड ट्रेडिङमार्फत धेरै पैसा कमाउँछ । तर दोस्रो भागमा उसले सर्वसाधारणलाई मद्दत गरेको देखिन्छ । हर्षद मेहता चोर वा मसिहा के हुन् भनेर जोकोही प्रश्न गर्न सक्छ । निर्माताहरुले पनि फिल्ममा यही प्रश्नमा रहेर काम गरेका छन्, तर उत्तर छैन ।
अभिषेक बिग बुल वा बिग डाउन ?
अभिनयको कुरा गरौँ। सम्पूर्ण मैदान अभिषेक बच्चनका लागि खुला छ। उनले नै चौका र छक्का प्रहार गर्नुपर्ने हो । उनले नै फिल्मलाई सास दिनुपर्ने हो । यद्यपि काम ठिकै थियो । तर गुजराती भाषा अझै सिकेको भए हुने थियो भन्ने हर दर्शकले अनुभव गर्न सक्छन् । उनले यति गुजराती बोलेको छन् कुनै पनि गैर गुजराती मानिस गुजराती बन्नको लागि गर्छ। बिचबिचमा उनको रावण वाला हाँसोले पनि हामी केवल बलिउड फिल्म हेर्दैछौं र अभिषेक बच्चन एक अभिनेता हो भन्ने महसुस गराउँछ । बिग बुलमा अभिषेक हर्षद मेहता बनेका छैनन्, तर एक अभिनेता भने पक्कै बनेका छन् ।
कोही प्रभावित गर्न सक्षम भए ?
हर्षद मेहताको भाईको भूमिकामा सोहम शाह फिट हुन सकेका छैनन्। वास्तविकतामा भनिएको छ, अश्विन मेहता वकिल बने र धेरै जसो अवस्थामा आफ्नो भाइलाई बचाउन सङ्घर्ष गरिरहे। तर बिग बुलमा तपाईले केवल उनलाई एक कमजोर भाइको रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ । जसले आफैँलाई मात्र जोगाउने प्रयास गर्दछ। इलियाना डिक्रूजको बारेमा कुरा गर्दा उनलाई उनको क्यारियरको सबैभन्दा ठुलो भूमिका दिइएको थियो । ‘ग्ल्याम डल’ बन्नु भन्दा उनलाई बिग बुलमा एक मजबुत रोल दिइएको हो । तर परिणाम निराश। उनलाई देखेर पत्रकार जस्तो फिलिङ कहीँ कतै आएन । राम कपूर, निकिता दत्ता, सौरभ शुक्ला, सुप्रिया पाठक ती सबैले अभिनय गरिरहे तर वास्तविक पात्रहरू पछाडि छाडिए।
अन्तिममा यदि बिक बुललाई स्क्याम १९९२ भन्दा पहिले रिलिज गरेको भए, सायद मानिसहरूले स्क्याम १९९२ पनि हेर्ने थिएनन् होला ।
चलचित्र: दि बिग बुल
कलाकार: अभिषेक बच्चन, इलियाना डिक्रूज, निकिता दत्ता, राम कपूर
यस्तो छ बिग बुलको ट्रेलर:
उदयपुरमा चटयाङबाट एकजनाको मृत्यु
नेपालमा प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या दोब्बरले कसरी बढ्यो ?
कोरोनामय भारतको नयाँ किर्तिमान – एकैदिन तीन लाख ४७ हजार बढी सङ्क्रमित, २६ सयको मृत्यु